Impahla yangaphantsi |
I-anti-Static engenamthungo ethambileyo yoThutho olungenamthungo weLadies Panty
ABALELI-MBINI Umtya ogqunywe esinqeni uhleli kanye esinqeni. Akukho kuqengqeleka okanye ukungqubana, ngaphandle kokucinezelwa kodwa ugubungele ngokugqibeleleyo. Iimpahla zangaphantsi eziphakamileyo ziphakamisa inkxaso esiswini kwaye zinciphisa ukubonakala kwe-muffin ephezulu. Ezi panties zilungile kulawulo lwesisu, ezibandakanya ukogquma okupheleleyo. Ibhanti ebanzi ye-elastic iyanciphisa ukubonakala kwe-muffin ephezulu, kunye nokugubungela umva ngokupheleleyo kubonisa kakuhle isinqe.
UKUYILA KWEMibala EBALULEKILEYO YOMDLALO & UKUFANELEKA OKUFANELEKILEYO - Imfutshane yeengubo zangaphantsi zabasetyhini zibonelela ngenkangeleko ethambileyo yokugubungela ukhuseleko phantsi kwayo nayiphi na impahla. Umqhaphu wolula iipanty, akukho Pilling, Akukho RollingAkukho Bunching Izibophelelo zemilenze yokubopha ubungqina, uhlala endaweni yonke imini, umqhaphu ugqibelele kwaye ugcina upholile kwaye womile.Iimpahla zangaphantsi ze-UMMISS COTTON ziyasebenza kwaye ungazinxiba kunye neziketi zakho, kunye neelokhwe zakho ezivuthayo, ijeans ezinqeni eziphezulu.
Umatshini ongenasisindo wokuhlamba oomama abathandana nabasetyhini ukuze basebenze / bezemidlalo
Iiseti ezininzi ezahlukahlukeneyo ezipakisha iibhatyi ezilula ezingaphantsi komfazi zibandakanya emnyama, emhlophe, ngwevu emnyama, nude / beige, imibala eluhlaza okwesibhakabhaka ukukhetha. bamba iipanties zebhegi zenze imfihlo yakho ye-butt comfortsoft.
Ezona panties zintuthuzelo zabafazi / amanenekazi / amantombazana akwishumi elivisayo. ilungele ukuzilolonga, iimbaleki, ezemidlalo, ukuhamba, ukuzivocavoca ebusika okanye ehlotyeni, ukumelana nevumba kunye netekhnoloji yokusebenza kokufuma, ikugcina uhlaziyekile kwaye uzive womile imini yonke.